Agaasimaha PSG ee Leonardo oo ka war bixiyay mustaqbalka Neymar Jr iyo Kylian Mbappe… (Miyuu ku kalsoon yahay inay sii heysan karaan?) – Gool FM
Agaasimaha PSG ee Leonardo oo ka war bixiyay mustaqbalka Neymar Jr iyo Kylian Mbappe… (Miyuu ku kalsoon yahay inay sii heysan karaan?)
(Paris Saint-Germain) 14 Juun 2020. Agaasimaha kooxda Paris Saint Germain ee Leonardo ayaa ka war bixiyay qorshaha ay kooxdiisa ka leedahay mustaqbalka Kylian Mbappe iyo Neymar Jr kuwaasoo la hadal hayo inay ka tagi karaan caasimadda Faransiiska.
Mbappe ayaa lala xiriiriyay kooxaha Liverpool iyo Real Madrid inay doonayaan saxiixiisa, halka saaxiibkiis Neymar Jr isna lala xiriirinayo ku laabashada Barcelona si la mid ah xiisaha Real Madrid ayaa wali muuqda.
Qandaraasyada laba xiddig ayaa si isku mid ah u dhacaya xagaaga 2020, sidaas darteed awood ayaa loogaga fara maroojin karaa PSG xiddigahan xagaaga soo aaddan haddii aysan heshiis cusub ka saxiixanin.
Balse agaasimaha kooxda heysata horyaalka Ligue 1 ee Leonardo ayaa sheegay inaysan kooxdiisa isu diyaarin wali la’aanta Neymar iyo Mbappe, isla markaasa ay ku adkeysan doonaan sii heysashada labada weeraryahan.
“Ma jiraan wax noo sheegaya inay xagaagan naga tagayaan” ayuu Leonardo u sheegay warsidaha Faransiiska ka soo baxa Le Journal du Dimanche.
“Labadoodaba waxaa heshiisyadooda kaga harsan min labo sano, waxaana ka fikirireynaa sidii aan iyaga ka yeelli lahayn, waxaanna dooneynaa inaan hore u wada soconno” ayuu yiri 50-jirka reer Brazil.
Neymar ayaa ku sigtay inuu xagaagii hore ku laabto garoonka Camp Nou, balse damacii labada dhinac ma uusan noqon mid miro dhal ah.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda ku ciyaarta Parc des Princes ayaa dadaal adag ugu jirta sidii ay u sii ceshan lahayd labadan laacib ee helaya xiisaha kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub.
10 qodob oo go'aamin karta in Real Madrid ay La Liga ku guuleysato ama inay hanan wayso
Zidane oo ay caawa habeen gaar ah u tahay... (Muxuu kaga dhigan yahay kulanka Eibar?)